हामी संयुक्त राज्य क्यापिटलमा के हेर्न सक्छौ? | यात्रा समाचार
हामी संयुक्त राज्य क्यापिटलमा के हेर्न सक्छौ?
वाशिंगटनको क्यापिटल हिलबाट हेराईहरू
संयुक्त राज्य क्यापिटल देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित स्मारक हो जुन आफ्नो प्रजातन्त्रको प्रतीक हो। वाशिंगटन डीसीको भ्रमण पूर्ण हुनेछैन यदि हामी स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको मूल्यमान्यताबाट प्रेरित भएको महत्त्वपूर्ण भवनको भ्रमण गर्दैनौं।
अर्को, हामी क्यापिटोल भित्र जान्छौं यसलाई राम्रोसँग जान्नको लागि र तपाईंलाई यात्रा व्यवस्थित गर्न केहि सुझावहरू दिन्छौं।
1 क्यापिटल भनेको के हो?
2 क्यापिटल कहाँ अवस्थित छ?
3 यात्रा कहाँ सुरु गर्ने?
4 क्यापिटल भ्रमण गर्दै
5 आगन्तुक केन्द्र कस्तो छ?
6 के क्यापिटलको निर्देशित भ्रमणहरू छन्?
7 के तपाईं सिनेट र प्रतिनिधि सभाको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ?
8 क्यापिटल भ्रमणका लागि सुझावहरू
क्यापिटल भनेको के हो?
यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको विधायी कक्षहरूको सीट हो। यसैले प्रतिनिधिसभा र सिनेटको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसको वरपर सुप्रीम कोर्टको मुख्यालय र कांग्रेसको पुस्तकालय पनि छन्।
वास्तवमा क्यापिटोल १ architect औं शताब्दीको अन्ततिर निर्माण हुन थाले समान वास्तुकला शैलीको भवनहरूको समूह बनाइएको छ।वाशिंगटन शहरको केन्द्रबिन्दु विकसित भएपछि।
क्यापिटल कहाँ अवस्थित छ?
यो क्यापिटल हिल भन्ने पहाडमा अवस्थित छ, जहाँबाट तपाईं प्रभावशाली दृश्यहरू हुनुहुन्छ र क्यापिटल अझ ठूलो देखिन्छ, जसले शक्तिको भावना दिन्छ।
वाशिंगटन क्यापिटलको छवि, शहरमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको ठाउँहरू मध्ये एक
यात्रा कहाँ सुरु गर्ने?
वाशिंगटन डी.सी. भ्रमण गर्न सुरु गर्नु राम्रो विचार हुन सक्छ नेशनल मल्लबाट सुरू गरेर, बगैंचा, स्मारक र स्मारकहरूले घेरिएको विशाल आउटडोर क्षेत्र जुन संयुक्त राज्यको इतिहासलाई साक्षी दिन्छ। यसको स्थापना पछि। यो क्षेत्र हो जहाँ राजधानीले यसको सबै शक्ति देखाउँदछ, जसले यसलाई मनन गर्दछ सबैलाई प्रभावित गर्दछ।
राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटनले १ 1791 XNUMX १ मा फ्रान्सेली वास्तुविद पियर्स चार्ल्स ल एन्फान्टलाई महान युरोपेली राजधानीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भव्य शहर डिजाइन गर्न आदेश दिए। यस प्रकारले पोटोमाक नदीको किनारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी के हुनेथियो।
त्यसबेलादेखि दुई शताब्दी बितिसकेको छ र वाशिंगटन डीसी विश्वव्यापी रूपमा एक महत्त्वपूर्ण शहर बन्न पुगेको छ। करीव २ माईल लामो, नेसनल मल्ल क्यापिटलबाट लिंकन मेमोरियलसम्म फैलिएको छ।
यस मल्लको माध्यमबाट हिँड्न लगभग पूरा दिन लाग्न सक्छ स it्ग्रहालयको ठूलो संख्याको साथ साथै प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र स्मारकहरूको लागि धेरै स्मारकहरूको उपस्थिति। अब, के हामी यस पोष्टमा कुरा गर्दैछौं क्यापिटोल हो त्यसैले हामी यसलाई अझ राम्ररी चिन्न सक्छौं।
क्यापिटल भ्रमण गर्दै
यसको निर्माण १ 1793 1883 in मा शुरू भयो र १ocXNUMX मा नियोक्लासिकल शैली पछि समाप्त भयो। पछिल्ला दशकहरूमा सुधार र विस्तारहरूले एक अर्कालाई अनुसरण गर्यो। नतीजा एक प्रभावशाली भवन थियो जसमा एउटा विशाल गुम्बज एउटा मादाको मूर्तिमा माथि थियो र नेसनल मल्लमा एक सीढी खोलिएको थियो। सबै उज्यालो सेतोमा।
टाढाबाट यो शहरको दुई मुख्य मार्गहरू, मेरील्याण्ड र पेन्सिलभेनियाको रूपमा देख्न सकिन्छ, त्यहाँ अन्त हुन्छ।
क्यापिटल एकदम अनुपातको एक भवन हो। उत्तर पट्टि सिनेटसँग सम्बन्धित छ भने दक्षिण पट्टि प्रतिनिधिसभासँग मिल्छ। माथिल्लो तलाहरूमा ग्यालरीहरू छन् जुन सार्वजनिकले केही खास अवसरहरूमा भ्रमण गर्न सक्दछ, भिजिटर सेन्टर त्यस्तो ठाउँ हो जुन आगन्तुकहरूको लागि उपस्थित हुन विशेष डिजाइन गरिएको हो।
यो प्रतिनिधि सभाको पूर्वी भागमा सडक तह तल अवस्थित छ र २०० 2008 देखि खुला छ। प्रवेश द्वार भवनको पछाडिको पहिलो सडकमा अवस्थित छ।
छवि | Keywordsuggest.org
आगन्तुक केन्द्र कस्तो छ?
यो एक ठाउँ हो जुन क्यापिटलमा आगन्तुकहरूको जिज्ञासालाई सन्तुष्ट पार्नको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको हो। यसको माथिल्लो तल्लाबाट तपाईले गुम्बजको भित्री भाग र अमेरिकाको केही प्रतीकहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामी यहाँ फेला पार्न सक्छौं: स्ट्याचु अफ लिबर्टीको नक्कल जसले गुम्बजलाई मुकुट गर्दछ, यसको नमूना, तालिकामा जुन अब्राहम लिंकनले उनको दोस्रो कार्यकाल वा जर्ज वाशिंगटनले १ 1793 XNUMX in मा क्यापिटल निर्माण गर्नका लागि राखेका पहिलो ढु of्गाको कार्यमा हस्ताक्षर गरे।
फेरी, भिजिटर सेन्टरमार्फत तपाईले पुस्तकालयको पुस्तकालयको थोमस जेफरसन भवन सिधा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। क्यापिटलको भ्रमणको सब भन्दा चाखलाग्दो ठाउँहरू मध्ये एक।
आगन्तुक केन्द्र बनेको छ:
प्रदर्शनी हल: क्यापिटलमा समर्पित प्रदर्शनी र संस्थाको रूपमा कांग्रेसको इतिहास।
Emancipation हल: खाली ठाउँ जहाँ सामान्य सेवाहरू अवस्थित छन्।
पसल, सेवा र लाकरहरू
छवि | क्यापिटलको वास्तुकार
के क्यापिटलको निर्देशित भ्रमणहरू छन्?
अवश्य पनि, तर एक पहिले आरक्षण आवश्यक छ। सबै निर्देशित टूरहरू भिजिटर सेन्टरमा सुरू हुन्छ र अन्त हुन्छन्। यी नि: शुल्क छन् र तिनीहरूको समयहरू ० 08::30० देखि १:16::30० सम्म सोमबारदेखि शनिबार क्रिसमस, नयाँ वर्षहरू, धन्यवाद र राष्ट्रपतिको उद्घाटन दिन बाहेक हुन्।
नि: शुल्क गाईड टुरहरू पनि लाइब्रेरीमा उपलब्ध छन्। तिनीहरू लगभग एक घण्टा हुन्छन् र सोमबारदेखि शुक्रवार बिहान every: .० बिहान .::10० सम्म हरेक घण्टा लिन्छन्।
के तपाईं सिनेट र प्रतिनिधि सभाको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ?
यो सम्भव छ तर यसका लागि तपाईंलाई विशेष पास आवश्यक छ र ती पर्यटक केन्द्र भ्रमणको हिस्सा होइनन्। दुबै कक्षहरू दुबै भ्रमण गर्न सकिन्छ जब त्यहाँ सत्र हुन्छ र जब यो अवकाशमा हुन्छ, तर यसका लागि पास दुई तरिकाले प्राप्त गर्नुपर्दछ:
विदेशीहरूले भ्रमण गर्ने केन्द्र (सेनेट र हाउस अपोइन्टमेन्ट) को माथिल्लो तहको काउन्टरहरूमा जानु पर्छ र त्यहाँ पास अनुरोध गर्नु पर्छ। क of्ग्रेसको गतिविधिको आधारमा उनीहरूले उही दिन भेट्ने सम्भावना छ।
संयुक्त राज्यका बासिन्दाहरूले यी चेम्बरहरूमा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पास अनुरोध गर्न सक्छन्।
जब कक्षहरूमा सत्र छैन, तिनीहरू बिहान9देखि साँझ 16: १ p बिहान खुला रहन्छ। यदि तिनीहरू सत्रमा थिए भने, पहुँच समय सूचित हुन्छ।
क्यापिटल भ्रमणका लागि सुझावहरू
भ्रमणकर्ता केन्द्रमा पहुँच गर्न कडा सुरक्षा नियन्त्रण छ।
यदि तपाईं क्यापिटलको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, समयमै आइपुग्नुहोस् र तालिकाबद्ध गरिएको समय भन्दा १ minutes मिनेट पहिले देखाउँनुहोस्।
क्यापिटलको गुम्बजमा जान सम्भव छैन।
यदि तपाईं धेरै साना बच्चाहरूको साथ जानुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो जान्नुपर्दछ कि तपाईं गाडाको साथ सेनेट र क enter्ग्रेसमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं भिजिटर सेन्टरको गाईड भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रदर्शनी हल बाहेक, व्यक्तिगत भिडियोहरू र भ्रमणका फोटोहरू लिनको लागि सम्भव छ, तर व्यावसायिक होइन। कारण त्यहाँ प्रदर्शन गरिएका पुराना कागजातहरूको रक्षा गर्नु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » संयुक्त राज्य अमेरिका » हामी संयुक्त राज्य क्यापिटलमा के हेर्न सक्छौ?